N'ogbe na -adịghị ike isi anion mgbanwe resin emeputa na onye na -ebubata ya Dongli
Resin siri ike nke anion siri ike
Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ ỌrụOtu Ionic Ụdị Mkpokọta ikike mgbanwe meq/ml Ọdịnaya Mmiri Akụkụ urughuru mm ỌzịzaFB→ Cl Max. Mbupu ibu g/l
MA301 Macroporous Ploy-styrene nwere DVB Opaque White Spherical chaplet Mahadum Terminal Ntọala efu 1.4 55-60% 0.3-1.2 20% 650-700
MA301G Poly-Styrene macroporous nwere DVB Ọkpụkpụ Ọdịdị White Mahadum Terminal Cl- 1.3 50-55% 0.8-1.8 20% 650-690
GA313 Gel ụdị Poly-acrylic na DVB Tnne na nna Ọdịdị okirikiri Mahadum Terminal Ntọala efu 1.4 55-65% 0.3-1.2 25% 650-700
MA313 Poly-acrylic macroporous nwere DVB Ọkpụkpụ Ọdịdị White Mahadum Terminal Ntọala efu 2.0 48-58% 0.3-1.2 20% 650-700
Mwepụ adịghị ọcha
Ngwaahịa mmepụta ihe nke resin mgbanwe ion na -enwekarị obere polymer dị ala na monomer na -anaghị arụ ọrụ, yana adịghị ọcha dị ka iron, lead na ọla kọpa. Mgbe resin nọ na mmiri, acid, alkali ma ọ bụ ihe ngwọta ndị ọzọ, a ga -ebuga ihe ndị ahụ dị n'elu n'ime ngwọta, na -emetụta ịdị mma nke mmiri na -asọ asọ. Ya mere, a ga -ebu ụzọ mee resin ọhụrụ ahụ tupu eji ya. Na mkpokọta, a na-eji mmiri eme ka resin gbasaa nke ọma, mgbe ahụ, enwere ike wepu adịghị ọcha ahụ (ọkachasị ihe ndị mejupụtara ígwè) site na 4-5% dilute hydrochloric acid, enwere ike wepu adịghị ọcha ahụ site na 2-4% tụgharịa sodium hydroxide. ngwọta. Ọ bụrụ na ejiri ya na nkwadebe ọgwụ, a ga -etinye ya na ethanol.
Ọgwụgwọ ịgbalite oge
N'iji resin, ọ dị mkpa igbochi kọntaktị na mmetọ mmanụ, microorganism microorganism organic, oxidant siri ike na ọla ndị ọzọ (dị ka ígwè, ọla kọpa, wdg) iji zere ibelata ikike mgbanwe ion ma ọ bụ ọbụna kwụsị ọrụ. Ya mere, a ga -eme ka resin rụọ ọrụ oge niile dịka ọnọdụ siri dị. Enwere ike ikpebi usoro ịgbalite dị ka ọnọdụ mmetọ na ọnọdụ si dị. N'ozuzu, resin cation dị mfe mmetọ site na Fe na -emetụ site na imikpu hydrochloric acid, wee jiri nwayọ tụgharịa, resin anion dị mfe mmetọ site na ihe ọkụkụ. Enwere ike itinye ya mmiri ma ọ bụ jiri 10% NaCl + 2-5% NaOH gwakọtara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike itinye ya na mmiri 1% hydrogen peroxide ruo ọtụtụ nkeji. Ndị ọzọ, nwekwara ike iji ọgwụgwọ ọzọ acid-base, ọgwụgwọ ịcha ọcha, ọgwụgwọ mmanya na ụzọ sterilization dị iche iche.
Imezi resin ọhụrụ: na ngwaahịa ụlọ ọrụ nke resin mgbanwe ion, enwere obere oligomers na monomers na -anaghị esonye na mmeghachi omume, yana nwekwara adịghị ọcha dị ka iron, lead na ọla kọpa. Mgbe resin na -akpọtụrụ mmiri, acid, alkali ma ọ bụ ihe ngwọta ndị ọzọ, a ga -ebufe ihe ndị dị n'elu n'ime ngwọta, nke ga -emetụta ịdị mma nke nsị. Ya mere, a ga -ebu ụzọ gwọọ resin ọhụrụ ahụ tupu ojiji. Na mkpokọta, resin ga-eji mmiri gbasaa, mgbe ahụ enwere ike wepu adịghị ọcha nke anụ ahụ (ọkachasị ogige igwe) site na 4-5% dilute hydrochloric acid, enwere ike wepu adịghị ọcha ahụ site na 2-4% dilute sodium hydroxide solution ka a sachaa ka ọ nọpụ iche.
Osote: Resin macroporous chelation